Articles tagged 'alban chirume'
'ZSE revised listing rules now complete' 10 June 2015 HARARE – The Zimbabwe Stock Exchange (ZSE) is expecting the revised listing requirements to be gazetted soon after they were approved by the Securities and Exchange Commission of Zimbabwe early this year. Alban Chirume, ZSE's chief executive, said the revision of the listing requirements, whic...
ZSE predicts more takeovers 28 October 2014 HARARE - The Zimbabwe Stock Exchange (ZSE) says company takeovers are likely to increase, as most listed stocks are undervalued. “In the current environment where the market values of counters are generally at a discount to the net asset value of the companies, it is expected that the number o...
CSD trials begin 17 June 2014 HARARE - Chengetedzai Depository Company (CDC) is now conducting trials of the central securities depository (CSD) system as part of efforts to fully automate trading on the Zimbabwe Stock Exchange (ZSE) by year end. CDC – a company formed to establish and operate the CSD for Zimbabwe's securi...
ZSE to begin automated trading next year 31 August 2013 HARARE - Zimbabwe Stock Exchange (ZSE)'s automation will begin next year following the appointment of a Mauritius-based consultant. Alban Chirume, the bourse's chief executive, on Thursday said that the automated trading system – which will go live in the first quarter of 2014 — is poised to t...
Chirume new ZSE boss 31 May 2013 HARARE - THE Zimbabwe Stock Exchange (ZSE) has appointed Alban Chirume as its new chief executive. Eve Gadzikwa, the bourse s chairperson, said Chirume s appointment is with effect from June 1. The appointment was done independently and was not in any way influenced by any institution or individu...